Nutella enwere ike ịbụ aha maka gam akporo N? | Gam akporosis
Onye osote onye isi oche nke gam akporo na-azogbu anyi ka obu eziokwu na Nutella ga-abu aha gam akporo N?
Google gwara anyi ka anyi sonye na ihe anyi nyere ha aka aha gam akporo N. Kindsdị ndụmọdụ niile bịara na ọbụna ụfọdụ aha ndị mara mma dịka nke gam akporo Nachos, mana anyị ka chọrọ ịma ihe ga-abụ aha a ga-enye ụdị ọhụrụ ahụ nke ga-anọnyere anyị n'oge ọkọchị a, ọbụlagodi na ngwaọrụ Nexus .
Amaghị m ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịkụda anyị ntakịrị, mana Hiroshi Lockheimer, osote onye isi ala nke gam akporo, Chrome OS na Storelọ Ahịa Play, dị ka o doro ya anya na mmekọrita na Nutella dị ka aha a họọrọ maka usoro ọzọ nke OS maka ngwaọrụ mkpanaka. Agaghị eju anyị anya ma ọ bụrụ na ọ bụ nke a mgbe ị gafesịrị gam akporo 4.4 KitKat.
Ma ọ bụ na Lockheimer ewerewo nke ya Twitter ka ọgbaghara ya iji gosiputa nseta ihuenyo nke desktọọpụ gị na-egosi nchọta weebụ maka Nutella. Anyị amaworị na ọ nwere oke nhọrọ maka mgbasa chocolate a nke ọtụtụ ndị Fans nwere n'ụwa, n'ihi na ọ bụghị oge mbụ ọ gosipụtara mmasị ya maka nri a. N’izu gara aga, o kesara onyogho ọzọ nke menu eji megharịa ọnụ nke akpọrọ Nutella Pizzetta.
Anyị makwaara na ụdị akụkọ a ha na-atụ na sibylline na-eme ka ha gbasaa ma bulie atụmanya ndị ọzọ maka ịmata aha gam akporo N. .dị ahịa dị mma ma n'oge a ọ ga-akpọrọ anyị gaa ụdị ụtọ dị ụtọ nke ọzọ nke ọtụtụ n'ime anyị dabara na ọnwụnwa nke ịgbasa ya na achịcha ma ọ bụ ọbụlagodi na sandwiches.
N'ọnọdụ ọ bụla, anyị ga-akpachara anya banyere ohere anyị nwere ike ịmalite ịkpọ oku Gam akporo Nutella gaa na nsụgharị OS ọzọ nke ga-anọnyere anyị maka oge okpomọkụ a na mbata nke ụfọdụ Nexus ọhụrụ. Cheta na ụbọchị isii gara aga ha kwupụtara na n'oge na-adịghị anya anyị ga-ama ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Onye osote onye isi oche nke gam akporo na-azogbu anyi ka obu eziokwu na Nutella ga-abu aha gam akporo N?
Chukwu gini bu aha ojoo ...